Fahasamihafana eo amin'ny RN (mpitsabo mpanampy voasoratra anarana) sy ny NP (mpampiofana mpitsabo mpanampy) | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny RN (mpitsabo mpanampy voasoratra anarana) sy ny NP (mpampiofana mpitsabo mpanampy) | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Fahasalamana / Fikarakarana ara-pahasalamana / asa / Fahasamihafana eo amin'ny RN (mpitsabo mpanampy voasoratra anarana) sy ny NP (mpitsabo mpanampy)
Fahasamihafana eo amin'ny RN (mpitsabo mpanampy voasoratra anarana) sy ny NP (mpitsabo mpanampy)
10 Janoary 2011 Narotsak'i Aron
RN (mpitsabo mpanampy voasoratra anarana) vs NP (mpitsabo mpanampy)
Marina fa ny RN sy ny NP dia anjara asan'ny mpitsabo mpanampy izay mampiseho ny tsy fitovizany. Ny RN dia mijoro ho an'ny mpitsabo mpanampy voasoratra anarana ary ny NP kosa dia mpiorina amin'ny mpitsabo mpanampy. Ny mpitsabo mpanampy voasoratra anarana na ny RN dia matihanina mpitsabo mpanampy ary ny mpitsabo mpanampy dia mpitsabo mpanampy voasoratra anarana miaraka amin'ny andraikitra amin'ny famaritana sy fitsaboana ny toe-pahasalamana sasany.
Zava-dehibe ny manamarika fa ireo mpitsabo mpanampy voasoratra anarana dia matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana fa ireo mpitsabo mpanampy kosa dia manana fiofanana ho mpitsabo mpanampy sy roa taona. Ny RN dia tokony nahazo mari-pahaizana 2 ka hatramin'ny 4 taona momba ny bakalorea amin'ny siansa fitaizana nono na mpitsabo.
Ny RN dia mahita ny fametrahana azy eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso ny aretina, ny fampiroboroboana ny fahasalamana ary ny fitsaboana ara-pahasalamana. Ny NP etsy ankilany dia miasa amin'ny faritra voakasiky ny fanabeazana aizana, ny aretim-behivavy, ny dokoteran-jaza, ny fahasalamana ara-tsaina ary ny fikarakaran'ny zokiolona.
Samy samy hafa ny RN sy ny NP amin'ny sehatry ny asany. Ny RN dia ampiasaina matetika hikarakara ireo fikarakarana marary any amin'ny birao, andrim-panabeazana ary serivisy ara-pahasalamana ho an'ny fiarahamonina momba izany.
Ny NP etsy ankilany dia miasa miaraka amin'ny fikasana hampiditra azy ireo amin'ny famaritana sy fitsaboana ny aretina sy ny aretina. Mahay ihany koa izy ireo amin'ny fanatanterahana ny fanadinana toy ny taratra X sy ny fizahana ara-batana an'ireo marary. Izy ireo dia tokony hanomana tantaram-pitsaboana ireo marary koa.
Ny iray amin'ireo fahasamihafana lehibe eo amin'ny NP sy ny RN dia ny fahafahan'ny NP manome fanafody satria omena alalana hitarika aretina izy. Azon'ny mpitsabo arahana izy na tsia. Avelany hiasa mahaleo tena izy ireo. Ny RN etsy ankilany dia tsy mahazo miasa tsy miankina. Tsy maintsy miasa ao amin'ny fikambanana fikarakarana ara-pahasalamana izy ireo ary tsy manan-jo hanome fanafody.
Ao amin'ny fohy:
- Ny RN dia mijoro ho an'ny mpitsabo mpanampy voasoratra anarana fa ny NP kosa dia mpiorina amin'ny mpitsabo mpanampy
- RN dia matihanina amin'ny fikarakarana ara-pahasalamana manana mari-pahaizana 2 ka hatramin'ny 4 taona amin'ny bakalorea amin'ny siansa mpitsabo mpanampy na mpitsabo. Ny NP dia mila miofana mandritra ny roa taona amin'ny fampiofanana mpitsabo mpanampy ankoatry ny mari-pahaizana diplaoma
- Ny NP dia afaka manome fanafody raha tsy RN tsy afaka
- Avela hiasa tsy miankina ny NP fa ny RN kosa tsy
Fahasamihafana eo amin'ny psikology sy psychiatrist
Filed Under: fiekem Tagged amin'ny: Degree in Bachelor ny Siansa amin'ny fitaizana ny be antitra , Health Care , NP , Nurse mpanao , Nursing asa , Nursing Siansa , Registered Mpitsabo Mpanampy , RN
Momba ny mpanoratra: Aron
Profesora amin'ny siansa ara-tsosialy ary mpanoratra mpandray anjara amin'ny Fahasamihafana
Hoy i Sharon
12 Mey 2017 amin'ny 10:09 alina
Efa nihaona tamin'ny dokoterako aho nanomboka tamin'ny 1986 ary manana NP izy izao ary terena hijery azy aho. Heveriko fa tsy mety izany. Vonona ny hanova dokotera aho. Tokony hanana safidy aho. Fantatro fa hanafaka azy ny sasany, saingy sosotra mafy aho amin'izany.
Fahasamihafana eo amin'i Montessori sy Steiner
Fahasamihafana eo amin'ny Golden Globes sy Oscars
Fahasamihafana eo amin'ny plasma sy ny tisue fluid
Fahasamihafana eo amin'ny mpanafika sy ny hery manokana
Fahasamihafana eo amin'ny superconductor sy ny conducteur tonga lafatra